Resin Bond Diamond Ndị na-emepụta - China Resin Bond Diamond Factory & Suppliers
A10 Amber Agba Cubic Boron Nitride Abrasive Powder For Resin Bond Application
A10 Amber Color Cubic Boron Nitride Abrasive Powder For Resin Bond Application 1. Cubic Boron Nitride Introduction CBN (cubic boron nitride) superabrasive nwere oke ike na nguzogide okpomọkụ dị elu, okpukpu anọ nke nke abrasive ọdịnala na-eguzogide akwa, ma nwee oke nrụpụta ọkụ. A na-ejikarị CBN eme ihe n'ahịa na-egweri ihe, site na aerospace superalloys na spraying thermal na ígwè siri ike na-arụ ọrụ ụgbọala na ụlọ ọrụ gia iji meziwanye effi ...
SND-R15 Standard Grade Blocky Resin Bond Diamond Na Ọkara Friability
Akwadoro maka usoro nke vitrified na resin bond (phenolic na polyimide) sistemụ. A na-eji sistem resin emekọrịta ihe maka ebumnuche ebumnuche niile na ebumnuche nke phenolic ma ọ bụ polyimide. SND-R15 nwere ọkọlọtọ ọkwa blocky resin bond diamond. Igwe okwu a na-egosiputa ihe na-egosiputa ikike iji aka ya na-amuta ihe nke na-eweputa ihe omuma nke di oke nkpa n'igide nguzo di n'etiti ndu ngwa oru na ime ihe. Aha ： RVG Diamond Powder Brand ： SND-R1 ...
SND-R20 Premium Grade Blocky Na nke kacha nta Friable Na resin Bond Diamond
Akwadoro maka usoro nke vitrified na resin bond (phenolic na polyimide) sistemụ. A na-eji sistem resin emekọrịta ihe maka ebumnuche ebumnuche niile na ebumnuche nke phenolic ma ọ bụ polyimide. A na-eji usoro seramiiki arụ ọrụ sitere na seramiiki siri ike, na-adịgide adịgide ma na-emebi emebi. Njikọ agbụ dị nnọọ irè na arụmọrụ na-egweri ihe n'ihi ike ha nwere ijide abrasive ma belata ọgbọ okpomọkụ na mpaghara egweri n'ihi nnukwu porosity le ...
SND-R05 Kasị Elu Friability Resin Bond Diamond akụkụ ahụ maka oke nkenke ngwe ọka
Kachasi Friability resin Bond Diamond akụkụ ahụ n'ihi na oke nkenke egweri ngwa na-atụ aro maka vitrified nkekọ na resin nkekọ (phenolic na polyimide) usoro. SND-R05 nwere ihe kachasị mkpa resin bond diamond with a crystal structure nke na-akwalite micro fracturing. Irè n'ihi na oke nkenke egweri ngwa ebe elu imecha bụ a dị oké egwu ihe. Aha ： RVG Diamond Powder Brand ： SND-R05 ntupu ： 60 / 70-325 / 400 Agba Application Gray Ngwa ： Kwesịrị maka v ...